Zaza 9 taona tratry ny Covid-19 Tandindonin-doza ireo olona marefo
Miisa 82 ny fitiliana natao teny amin’ny Institut Pasteur de Madagascar [IPM] ny alakamisy 23 aprily ka hatrain’ny sabotsy 25 aprily tamin’ny 12ora atoandro, ka olona iray no voamarina fa tratry ny coronavirus tao anatin’ireo, nampiakatra ny isa ho 123. Lehilahy 35 taona any Toamasina izy io.
Nisy iray no sitrana teo, ka nampiakatra ny isa ho 61 tamin’ny sabotsy. Omaly kosa, dia nahitana tranga iray vaovao ny fitiliana 63 vita, ka nampiakatra ny isa ho 124 nanomboka hatramin’ny nahatafidirany teto Madagasikara 19 martsa, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle Mpitondra tenin’ny CCO Covid-19. Tovolahikely vao 9 taona any Toamasina izy io, efa tsaboina, tsy misy soritr’aretina atahorana. Tany aloha dia efa nisy zaza 4 sy 12 taona voa tany an-toerana. Niampy 9 ihany koa ny sitrana izay efa 71 amin’izao fotoana izao PCR eny amin’ny IPM, ary 53 ireo mbola tsaboina, ka tsy misy soritr’aretina tena atahorana. Mamaly ny fepetra famaritana ny fahasitranana ireo sitrana, dia ny fitiliana in-droa misesy mielanelana roa andro, ka rehefa samy “negative” dia izay no atao hoe sitrana.
MILA HAROVANA MAFY IREO MAREFO
Mitohy tsy tapaka ny fitiliana, ary matoa mbola misy olona vaovao dia mbola ao anatin’ny ady tanteraka isika. Rehefa misy ireo olona maneho soritr’aretina ka ahiana ny aminy no tiliana. Rehefa manantona ny toeram-pitsaboana dia mandray an-tànana avy hatrany ny tompon’andraikitra. Manana mpanao fanadihadiana ifotony rahateo ny mpiasan’ny fahasalamana mitily izay mety ho voa. Ho an’ireo olona marefo raha sanatria tsy voaray ara-potoana dia sanatriavin’ny vava hamoy ny ainy, hoy ny Pr Vololontiana Hanta. Na tsy ao anatin’ny marefo aza dia mety hanao ilay tranga mampanahy ihany. Atao am-pitiavana ny fiarovan-tena, fiarovana ireny olona marefo ireny: mihoatra ny 70 taona, taizan’aretina, marary voa, marary foa, diabetika, misy takaitra, voan’ny homamiadana, ireo mihinana fanafody mampihena ny hery fiarovana.